Myanmar ICT Awards 2009 Winners
Submitted by mcpaadmin on Fri, 02/26/2010 - 11:32
ID Project Title
Person/Organization Award Title
1 BoBo.6te.net ဦးဇော်ဝင်းဦး(လောကနတ်) Website of the Year
2 Pocket Pitaka ဦးရဲမြတ်သူ(Alpha Info-Tech)	 Mobile Application of the Year
3 ဂျီသြမေတြီဆိုင်ရာ အခြေခံများ မသက်ထားသူဇာ(ထ(၂)၊ ကမာရွတ်) Education Project of the Year (Primary)
Little Grammer Books မနှင်းစန္ဒီဦး(ထ(၂)၊ ကမာရွတ်)
4 စွမ်းအင်များကို လေ့လာခြင်း မောင်ရဲလွင်ဖြိုး (လ(၃)၊ ဟင်္သာတ) Education Project of the Year (Middle)
5 Clocks Through Time မောင်အောင်ကိုမင်း+ မောင်အော်ဇော်မြတ် (ထ(၂)၊ တာမွေ) Education Project of the Year (High)
6 Musical Instruments ဒေါ်လွင်မာညွန့်(ထ(၂)၊ ဗဟန်း) Education Project of the Year (Teacher)
1 sm3 Myanmar Traditional Calendar ဦးတင်မျိုးဟန်(sm3 Mobile Solutions) Mobile Application of the Year
2 myanmardaily.net ဦးအောင်ကိုမြတ် Website of the Year
3 onlineictreader.com ဦးဇော်လင်း(Youth) Website of the Year
Education Projects of the Year
1 Healthy habits for healthy living မရဲရင့်၊ မောင်ကောင်းဆက်မိုး ရန်ကင်းလေ့ကျင့်ရေး အလယ်တန်းကျောင်း၊ ပညာရေးကောလိပ် Middle
2 မျဉ်းဖြောင့်အရ ခေါက်ချိုးညီပုံများ မမေသင်းခိုင် မန္တလေး လ(၇)၊ မဟာအောင်မြေ Middle
3 သက်ရှိများ မောင်သန့်စင် မန္တလေး ထ(၁၆)၊ ချမ်းအေးသာစံ Middle
4 သူငယ်တန်းဖတ်စာ သင်ခန်းစာ(၁)(၂)(၃) နှင့် အခြေခံများ မောင်ဥက္ကာ မန္တလေး ထ(၁၆)၊ ချမ်းအေးသာစံ High
5 သတ္တ၀ါများ ဒေါ်နှင်းဝတ်ရည်မြင့် ထ(၁)၊ သန်လျင် Teacher
6 Present Continuous Tense ဒေါ်တင်တင်ဝေ+ (၁၀)ဦး ထ(၁)၊ သန်လျင်ကျောင်းများ Teacher
Read more about Myanmar ICT Awards 2009 Winners
Product Presentation - S/W & Solutions
Submitted by tunkhine on Wed, 02/24/2010 - 13:02
Software & Solutions Exhibition (Feb 2010)
Product Presentation List
Day-1 Conference Hall Room (205)
ITEM Time Company ITEM Time Company
E-Government (10) 10:00 - 10:30 MPT Banking (2) 10:00 - 10:30 ACE
10:30 - 11:00 Creative 10:30 - 11:00 MIT
11:00 - 11:30 Gusto
11:30 - 12:00 Concordia
12:00 - 12:30 MTG
1:30 - 2:00 ACE E-Education (3) 1:00 - 1:30 IM
2:00 - 2:30 IM 1:30 - 2:00 MCC
2:30 - 3:00 MIT 2:00 - 2:30 Prime Boss
3:00 - 3:30 Prime Boss Retail (3) 3:00 - 3:30 ACE
3:30 - 4:00 MCC 3:30 - 4:00 MIT
4:00 - 4:30 MMG
Day2Manufacturing (4) 9:00 - 9:30 MCC Construction (2) 9:00 - 9:30 Concordia
9:30 - 10:00 Gusto 9:30 - 10:00 MIT
10:00 - 10:30 ACE Fisheries (2) 10:30 - 11:00 Gusto
10:30 - 11:00 MIT 11:00 - 11:30 ACE
Hotel & Tourism (6) 1:00 - 1:30 MMG Logistics (3) 1:00 - 1:30 Gusto
1:30 - 2:00 MIT 1:30 - 2:00 Concordia
2:00 - 2:30 ACE 2:00 - 2:30 MMG
2:30 - 3:00 MCC
3:00 - 3:30 Creative
3:30 - 4:00 Bizsoft
Day3General (10) 9:00 - 9:30 MCC
9:30 - 10:00 Bizsoft
10:00 - 10:30 AS
10:30 - 11:00 Technomation
11:00 - 11:30 MIT
11:30 - 12:00 IM
1:00 - 1:30 Global Wave
1:30 - 2:00 MMG
2:00 - 2:30 Creative
2:30 - 3:00 ACE
Read more about Product Presentation - S/W & Solutions
Submitted by tunkhine on Wed, 02/24/2010 - 11:39
Day-1 Conference Hall
Read more about Product Presentations
Seminar @ Software Development Experience in UK
Submitted by tunkhine on Wed, 02/17/2010 - 15:01
Seminar Title : Software Development Experience in UK
Speaker : U Moe Kyaw Soe
Date & Time : ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီ မှ (၃း၀၀) နာရီအထိ
Venue : မန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ ပင်မဆောင်ရှိ အခန်း(၂၀၅)
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှကြီးမှူး၍ နိုင်ငံတကာ Software Development ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်လုပ်နေသော ပုံစံများ၊ အသုံးပြုနေသော နည်းပညာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မြန်မာလူငယ်များသိရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီ မှ (၃း၀၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ ပင်မဆောင်ရှိ အခန်း(၂၀၅) တွင် UK နိုင်ငံရှိ IT ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်နေသော IT Specialist ဦးမိုးကျော်စိုး မှ “Software Development Experience in UK ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရှင်းလင်းဟောပြောမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ Software Engineer များ၊ကွန်ပျူတာနည်းပညာကို လေ့လာ နေသူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူ တာပညာရှင် အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄) အခန်း(၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆ သို့ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about Seminar @ Software Development Experience in UK
S/W & Solutions Exhibition 2010 - Booth Plan (Draft)
Submitted by tunkhine on Tue, 02/09/2010 - 17:07
Read more about S/W & Solutions Exhibition 2010 - Booth Plan (Draft)
Seminar @ Networking
Submitted by tunkhine on Tue, 02/09/2010 - 16:27
Seminar Title : “Essential Networking Technology & Network Professionals Trend ”
Date and Time : ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီ မှ (၄း၀၀)နာရီအထိ
Speakers : ဦးရဲကျော်သိန်း (Compu Tech Comupter Co.,Ltd)
ဦးအောင်ဇော်မြင့် ( M.S.T Computer Center)
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှကြီးမှူး၍ မြန်မာလူငယ်များ Networking ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာစေရန်အတွက် မသိမဖြစ် လေ့လာရမည့် Skills & Knowledge များကိုသိရှိစေရန် နှင့် နိုင်ငံတကာNetwork အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများကို သိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီ မှ (၄း၀၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ ပင်မဆောင်ရှိ Conference Hall တွင် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးရဲကျော်သိန်း (Compu Tech Comupter Co.,Ltd) နှင့် ဦးအောင်ဇော်မြင့် ( M.S.T Computer Center) တို့မှ “Essential Networking Technology & Network Professionals Trend ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရှင်းလင်းဟောပြောမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ Networking ပညာရပ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ကိုလေ့လာနေသူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄) အခန်း(၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆ သို့ဆက်သွယ် စုံစမ်း နိုင်သည်။
Read more about Seminar @ Networking
Submitted by tunkhine on Fri, 01/22/2010 - 15:58
ရက်စွဲ။ ။ ၂ဝ၁ဝ ခုနစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ Software & Solutions Exhibition (Feb 2010) ပြပွဲခင်းကျင်းပြသမည့် အကြောင်းအရာကိစ္စ အကြောင်းကြားခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) မှ ကြီးမှူးပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း (MCIA) တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပမည့် Software &
Solutions Exhibition (Feb 2010) ကို ၂ဝ၁ဝ ခုနစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် မှ ၂၈ ရက် အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်တွင် အောက်ပါနည်းပညာ ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး
(၂) Solution Provider များ
ပြပွဲရက်များတွင် ပြခန်းများခင်းကျင်းထားသည့် Exhibition နှင့် တက်ရောက်သူများကို အသေးစိတ် တင်ပြနိုင်မည့် Product Presentation အစီအစဉ် နှစ်မျိုးပါဝင်ပါသည်။
Product Presentation တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိုင်တီ အသုံးချဆုံး အရေးပါဆုံး အောက်ပါလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ကဏ္ဍအသီးသီးမှ ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပူးပေါင်းဖိတ်ကြား၍ Policy Maker
များ၊ Decision Maker များ၊ CIO များ၊ မန်နေဂျာများအား အသေးစိတ်တင်ပြနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
(၁) အစိုးရဌာနများ (၆) Retail Store ဆိုင်များ
(၂) ပညာရေးကဏ္ဍ (၇) ဆေးရုံဆေးခန်းများ
(၃) General Trading လုပ်ငန်းများ (၈) ငါးလုပ်ငန်း
(၄) Logistics ကဏ္ဍ (၉) ဘဏ်လုပ်ငန်း
(၅) Manufacturing ကဏ္ဍ
သို့ဖြစ်ပါ၍ ပါဝင်ပြသလိုသော ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်၍ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) ရုံးခန်း၊ အခန်း(၄)၊ အဆောင်(၄)၊
မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ လှိုင်တက္ကသိုလ် နယ်မြေ၊ ဖုန်း - ၆၅၂၂၇၆ သို့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၉) ရက် နောက်ဆုံးထား ပြန်လည်ပေးပို့ ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Read more about Software & Solutions Exhibition (Feb 2010)
Submitted by mcpaadmin on Mon, 01/18/2010 - 13:03
Seminar Title : “Software Testing”
Date and Time : ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက် (သောကြာနေ့) နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၂း၃ဝ အထိ၊
Venue : ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ အခန်း (၂၀၅)
Speaker : Mr.Len Aye, Senior Test Analyst @ UK Nokia
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက် (သောကြာနေ့) နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၂း၃ဝ အထိ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ အခန်း (၂ဝ၅) တွင် UK ရှိ Nokia ကုမ္ပဏီမှ Senior Test Analyst ဖြစ်သူ Mr.Len Aye မှ “Software Testing” ပြုလုပ်သည့် နည်းစနစ်များ ဖြစ်သည့် “Testing Tools, Test case generation, error management, test case management, test Reporting” အစရှိသည်တို့ နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ဟောပြောပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဟောပြောပွဲသို့ စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရန် မလိုဘဲ အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင်အဆိုပါနေ့ရက်တွင် နေ့လည် ၃းဝဝ နာရီမှ ၄း၃ဝ နာရီအထိ “Techniques for Testing Practioners” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် “Hands-on Workshop” တစ်ခုကို ဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ “Hands-on Workshop” သို့ တက်ရောက်လိုသူများသည် MCPA ရုံးခန်း၌ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပြီး၊ ထိုစာရင်းပေးသွင်း သူများထဲမှ သင့်တော်သူ အယောက် (၅ဝ) ကို MCPA မှ ရွေးချယ်ပြီး အခမဲ့တက်ရောက် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about Seminar and Workshop @ Software Testing
Myanmar ICT Awards 2009 အဆိုပြုလွှာတင်ရန် သတ်မှတ်ရက်ပြောင်းလဲ
Submitted by mcpaadmin on Fri, 01/15/2010 - 17:34
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ဝါသနာရှင်အသင်းများမှ ကြီမှူး၍ Myanmar ICT Awards ပြိုင်ပွဲကို နိုင်ငံတော်အဆင့် သတ်မှတ်၍ Mobile Application, Website, Educational Projectဟူ၍ ဆုသုံးမျိုးကို နှစ်စဉ်ရွေးချယ် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ရာ Myanmar ICT Awards 2009အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်လိုသူများကို ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၉ခုနှစ်အတွက် Myanmar ICT Awards အဖြစ် Mobile Application of the Yearနှင့် Website of the Yearတို့ကို ရွေးချယ်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်လိုသူများ အနေဖြင့် အဆိုပြု Projectတင်ရန် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကို ယခင်က ၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့ သတ်မှတ်ထားရာမှ ယခုအခါ ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၁၅ရက်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ အဆိုပြု Projectများကို ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ၁၅ရက် နေ့လည်၁၂း၀၀နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လှိုင်မြို့နယ် Myanmar Info-Techရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း ရုံးခန်းများသို့ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ Project ပေးပို့ရာတွင် Website/Application၏ ရည်ရွယ်ချက်(Objective)၊ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာ(Features)၊ ဈေးကွက်ရရှိမှု အခြေအနေ(Market Potential)၊ ထူးခြားချက်(Uniqueness)၊ နည်းပညာ(Technology)၊ အကျိုးကျေးဇူး(Benifits) စသည့်တို့ကို ပြည့်စုံစွာရေးသား၍ ပြိုင်ပွဲဝင် အဆိုပြုလျှောက်လွှာနှင့်အတူ CDဖြင့် လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍သော်လည်းကောင်း၊ Projectကို အွန်လိုင်းမှ ကြည့်ရှုနိုင်မည့် URLအား mcpamm@gmail.comနှင့် mciaoffice@gmail.comသို့ emailဖြင့်သော်လည်းကောာင်း ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲဝင် အဆိုပြုလျှောက်လွှာပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို www.myanmarictawards.org တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Ref: ကိုရဲ (Internet Journal , Vol. 11, No. 1)
Planet Myanmar Network (http://www.planet.com.mm/news/read.cfm/id/14300)
Read more about Myanmar ICT Awards 2009 အဆိုပြုလွှာတင်ရန် သတ်မှတ်ရက်ပြောင်းလဲ
Submitted by tunkhine on Thu, 01/14/2010 - 17:56